Ingabe yinoma iyiphi insizakalo yokuthola igama elingukhiye lama-Amazon, noma ingabe ngizothola ithuluzi lesofthiwe kunalokho?
Wonke umuntu uyazi ukuthi kunezinhlobonhlobo ezinhlobonhlobo zezinsizakalo ze-intanethi, amathuluzi okuthola igama elingukhiye we-Amazon kanye nezinhlaka ezigcwele zamafutha okuzokusiza ngaleyo ndlela edla isikhathi esiningi nokusebenza kakhulu. Ngenkathi ezinye zazo zingatholakala kalula ekufinyeleleni okuvulekile (okungenani ngezihumusho zabo eziyisisekelo zitholakale mahhala), bonke abanye beza njengokunikezwa okukhokhelwayo noma ngokubhalisa okuphila konke / ngezikhathi ezithile, noma ngezimali ezizokhokhiswa isenzo ngasinye (i. e. kuye ngokuthi bangaki imisebenzi eniyenzayo ngaphezu kwalokho). Kodwa kuthiwani uma ngithi i-Amazon inemodi yokuthola igama elingukhiye etholakalayo ngokuzenzakalelayo kodwa isetshenzisiwe akuyona yonke imthengisi edayisa ngaphezulu? Ngisho ukuthi ungase uphume ngokucwaninga ngamagama angukhiye womkhiqizo - ngokoqobo ngendlela engenalutho.
I-Amazon Autofill Option
Kungase kubonakale sengathi akuyona i-no-brainer, kodwa ungasebenzisa okuzenzakalelayo okukhethwa kukho okuzenzakalelayo ku-Amazon njengethuluzi lokuthola igama elingukhiye. Yiqiniso, kunikezwe ukuthi unemiqondo eminingana yembewu noma imibono ekusetshenzisweni kokusesha komsila. Konke okudingayo lapha ukuqhubeka nokuthayipha ibha yokusesha ye-Amazon - bese usebenzisa ukusebenzisa iziphakamiso ze-autofill ngenzuzo yakho siqu.
Enye indlela engafanele yokubeka umkhiqizo wakho phambi kwamagama angukhiye aphezulu okucinga. Vumela u-Amazon akwenze umsebenzi wakho - usebenzisa imikhankaso yokukhokha ngokuchofoza ngokuzenzakalela ukuze athole ngokuzenzakalelayo amanye amagama angukhiye we-niche, noma amagama angasetshenzisiwe kakhulu nje ekutholeni ukuthandwa kuze kube manje. Yiqiniso, isimo kuphela ukuthi kuzodingeka ukuthi uthole uhlu lwezinto, kanye nenye imali eyengeziwe okufanele isetshenziselwe leyo njongo.
I-Shark Amazon Igama elingukhiye le-Finder
Ithuluzi le-AMZ le-Shark yindlela elula kakhulu yokukhomba isethi esifanele samagama angokhiye womkhiqizo asekelwe ngezimpawu ezihlobene ne-LSI, kanye njengoba uthatha imishwana eminingi yokusesha emide, bese uthola amathuba angcono kakhulu we-niche abadlali bakho abaseduze kakhulu asebenzisayo kude kangaka. Konke okudingayo lapha kungokufaka igama elingukhiye elilodwa - futhi usuqedile. Zuza ohlwini oluthile olukhulu oluqukethe iziphakamiso ezingamakhulu eziwusizo eziyinhloko, iziphakamiso ezihlobene nomkhiqizo, kanye nemikhuba yokucinga yesikhathi eside esivela lapho okwamanje. Ake ucabange ukuthi yini engasebenza ebhizinisini lakho nokuthi yini okumele ukuthi ifakwe isikhalazo sokubhekisela kwekusasa.
Phakathi kwamanye amathuluzi okuthola amagama angukhiye e-Amazon anamandla futhi aqondile kakhulu, uMthengisi prime kungenzeka ukuthi angcono kakhulu ekusizeni ngokushesha ukuthola amanye amagama angukhiye anenzuzo kakhulu futhi angase azuzise isikhathi eside- imishwana yokusesha imisi ehlobene eduze ne-market niche yakho noma isigaba sento. Ngisho nohlobo lwayo lwamahhala lube lunqoba kakhulu kimi ukuba ngithobele uhlu lwami oluyinhloko lwamagama angukhiye ahlosiwe. Umthengisi wenkokhelo eyinkokhelo enkulu, noma kunjalo, angakusiza ngokucwaninga ngegama elingukhiye ngisho nokuphambili, ukufakwa ohlwini kuhlu, nokuqonda okubalulekile kokulandela amagama ukuze ukuphuma emncintiswaneni wemakethe we-cutthroat kungabi ukuphathwa okungcono kakhulu Source .